Ny modely dia iray amin'ireo antony tokony hampiasanao Wordpress amin'ny bilaoginao | Famoronana an-tserasera
Modely, iray amin'ireo antony tokony hampiasanao WordPress amin'ny tranokalanao na bilaoginao
WordPress dia sehatra iray miavaka noho ny antony maro ny lanja. Ankoatra ny be mpampiasa indrindra amin'izao fotoana izao, ny fahaizany manamboatra azy nefa tsy mila manam-pahaizana momba ny famolavolana tranonkala na CSS, dia manohana azy io ho safidy tsara indrindra ampiasaina raha te handefa ny tranonkalanao manokana ianao na mamorona bilaogy misy atiny manokana. Mazava ho azy fa raha efa te hamorona endrikao manokana ianao dia tsara kokoa ny mifanerasera amina matihanina, alohan'ny "hisitrihana" ao anaty sy ny famolavolana modely.
Izany no antony hanomezantsika hevitra momba ny sasany amin'ireo toetra tsara tokony hananan'ny WordPress no sehatra tsara indrindra handefa tranokala misy asa manokana na bilaogy amin'izay lohahevitra tiana horesahina. Ny iray amin'ireo tanjany dia ny manana maodely maherin'ny 2.600 sy plugins mihoatra ny 31.000 tsy misy vidiny azonao ampiasaina hanomezana atiny avo lenta ho an'ny mpihaino anao.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa mampiasa WordPress tsy mpamorona tranonkala izy ireo na koa programmer. Ity zava-misy ity dia efa manondro ny tena herin'ity sehatra ity, ary Strato dia mitarika antsika amin'ny famoronana tranokala miaraka amin'ny WordPress, noho izany, ho fanampin'izany, lasa tsotra be ilay asa. Izany no antony nanombohan'ny ankamaroan'ny mpampiasa tao amin'ny WordPress nefa tsy nanana fahalalana momba ny famolavolana tranonkala, ary noho izany dia sehatra mety ho an'izay te-hanangana tetik'asa web.
Misy maodely an'arivony azonao ampiasaina hanamboarana tranokala. Mamela antsika ireo omeo ny tranokalanay ny volavola tadiavinay na bilaogy tsy misy olana lehibe. Azontsika atao ny manova ny fisehoana hatrany mba hanakaiky kokoa ny lohahevitra fakana sary na portfolio izay tiantsika ho minimalism no mampiavaka azy indrindra.
Afaka mahita maodely tsy tambo isaina ianao ary ireo dia azo namboarina, mba hanomezana ny fahatsapana fa tokana ny tranokalanay. Raha mila môdely namboarina manokana izahay, dia hahita safidim-bola handefasana anay hiavaka kokoa ny tranokalanay raha azo atao, satria manana safidy namboarina bebe kokoa izy ireo.
Uno amin'ireo tranonkala tsara indrindra fahazoana a WordPress template no Themeforest, toerana iray hanangonana azy ireo na dia ny fomba vaovao indrindra amin'ny WordPress aza ary azonao atao ny manandrana mahita ny endrik'ilay tranokalanao.
Azonao atao ny manova ny loko, mampakatra logo, na manova ny ao ambadiky, mba hamoronana slider sy singa hafa afaka manome endrika manokana ny bilaogy. Raha manampy an'ity isika ny plugins an'arivony ananantsika ao amin'ny WordPress, azontsika atao ny manitatra ny fiasa na ny toetran'ny bilaogy resahina mba hampifanaraka azy amin'ny filantsika.
Ireo plugins ireo dia afaka manampy sehatra manokana inona ny WordPress, noho izany amin'ny faharetana sy fikirizana kely dia afaka mahazo valiny tena tsara ianao ao anatin'ny fotoana fohy raha manokana ny ora isan'andro ianao nefa tsy mamoy fo firy. Izahay dia mizara andiana plugins ambony kalitao maimaimpoana.
Tombony iray hafa amin'ny WordPress dia izy io tena manintona ho an'ny SEONoho izany, amin'ny fanarahana dingana vitsivitsy, ny tranokalantsika dia afaka miseho amin'ny valiny voalohany amin'ny motera fikarohana toa an'i Google, izay ho tombony lehibe ho an'ireo mpampiasa maro kokoa hamaky ny atiny na izay atolotray.
Raha fintinina, raha mitady a fanaingoana manokana ho an'ny tranonkalanao haingana, amin'ny alàlan'ny fampiasana maodely WordPress tsara ary amin'ny faharetana, azonao atao ny mamorona bilaoginao na tranokalanao tsy misy olana lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Wordpress » Modely, iray amin'ireo antony tokony hampiasanao WordPress amin'ny tranokalanao na bilaoginao
Mpanakanto toa an'i Jessica Walsh mameno eritreritra
Fanoratana graffiti amin'ny zava-misy virtoaly